कोरना भाइरस लागेका बेला सहवास गर्दा….. « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७६, बुधबार १२:४५
के सहवास सम्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ?
यसबारे तपाईँले सोच्नुभएको होला तर सङ्कोच लागेर प्रश्न नगर्नुभएको पनि हुन सक्छ।यस विषयमा सही र गलत कुरा छुट्यावन बीबीसी रेडिओ वनको न्यूजबीटले यो प्रश्न विज्ञहरूलाई राखेको छ।डा. एलेक्स जर्ज चिकित्सक हुन् भने सहवास विषयमा पत्रकारिता गर्ने एलिक्स फक्स बीबीसी रेडिओकी पूर्वप्रस्तोता हुन्।
के कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा सहवास सुरक्षित राख्नु सुरक्षित हुन्छ?
एलिक्स फोक्स र डाक्टर एलेक्स जर्ज
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र त्यो मानिससँगै बस्नुहुन्छ र एउटै वातावरणमा रहनुहुन्छ भने तपाईँले व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्दैन। तर यदि तपाईँहरूमध्ये एक जनामा कोरोनाभाइरसको लक्षण देखिएको छ भने तपाईँले घरमै पनि एकान्तवासमा बस्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो त घरभित्रै पनि सबै जना एकअर्काबाट दुई मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ।
नयाँ मानिससँग सहवास रा’ख्नु हुन्छ?
डा. एलेक्स जर्ज: म यो अवस्थामा नयाँ मानिससँग स’म्प’र्क राख्ने सल्लाह दिन्नँ। किनभने त्यसो गर्दा कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। एलिक्स फक्स: के नबिर्सिनुहोस् भने कोरोनाभाइरस भएका केही मानिसहरूमा लक्षण देखिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईँ एकदमै ठिक देखिनुभएको छ भने पनि तपाईँबाट अरूमा चु’म्ब’न’बाट पनि भाइरस सर्न सक्छ।
पहिले मैले ‘क’न्ड”म प्रयोग गरेको थिइनँ। के अब गर्नुपर्ला?
एलिक्स फक्स: यसको उत्तर तपाईँ किन पहिले लगाउनु हुन्नथ्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।यदि तपाईँहरू दुवै जनालाई कुनै सहवास रोग नभएको वा गर्भाधान नहोस् बनेर अन्य उपाय अवलम्बन गरिएकाले प्रयोग नगरेको भए केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ अन्य प्राकृतिक उपाय – जस्तो ‘स्ख”ल”न गर्ने वा एकअर्कालाई सहवास रोग छैन भन्ने विश्वासमा नलगाउनुभएको हो भने अब लगाउनु नै उचित होला।
के सहवास छोएका कारण कोरोनाभाइरस सर्छ?
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ एकअर्काको सहवास छुनुहुन्छ भने त्यो समयमा तपाईँहरूले चुम्बन गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र हामीलाई थाहा छ भाइरस थुकबाट सर्छ।
मुखबाट हातमा, हातबाट सहवास ा, सहवास हातमा र त्यसपछि हातबाट नाकमुखमा भाइरस सर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भाइरस सर्न सक्ने सबै खाले कुराहरू नगर्नु नै उचित हुन्छ। त्यसैले तपाईँसँगै नबसेका साथीसँग यो पनि नगर्नु नै उचित हुन्छ।
२५ असार २०७७, बिहीबार १३:५०